नितेश भन्छन्– सपोर्ट नभएर सांगीतिक क्षेत्र छोड्न लागेको होइन
मोरक्कोमा एक महिलाले एकैपटक ९ जना शिशुलाई जन्म दिइन्
काेराेना विरुद्धको खोपमा बौद्धिक सम्पत्तीको अवरोध हटाउन अमेरिका तयार
अब दाङमै अक्सिजन उत्पादन हुने
साढे दुई घण्टा राष्ट्रपति निवास बसेर निस्किए माधव नेपाल
जनताको लासमाथि भ्याक्सिनको राजनीति
रोमाञ्चक खेलमा विराटनगरलाई हाराउँदै काठमाडौं प्ले अफमा
भारतबाहेक सबै अन्त‍र्राष्ट्रिय उडान आज मध्यरातिदेखि बन्द
रकम बढी असुल गरेका छैनौँ : ह्याम्स अस्पताल
मन्त्रिपरिषद् बैठक : लुकाइएका सिलिन्डर खोज्ने र न्यायोचित वितरण गर्नेबारे छलफल
पूर्वी अफगानिस्तानमा तालिवान लडाकुको आक्रमणमा ११ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
बाह्रखरी - सोमबार, वैशाख २०, २०७८
काठमाडौं । युवा श्रोतामाझ लोकप्रिय युवा गायक नितेशजंग कुंवरले एक साताअघि दर्शकलाई चकित पार्दै अब सांगीतिक क्षेत्र निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । उनको यो स्ट्याटसपछि उनका दर्शकमा नितेशले सांगीतिक क्षेत्र किन छोड्न लागेको भन्ने कौतहुलता बढ्ेको थियो ।
अन्ततः नितेशले प्रशंसकको यहि जिज्ञासा मेटाउन खोजेका छन् । फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले यसको कारण बताउन खोजेका छन् तर अझै पनि नितेशले खुलेर प्रस्ट पार्न सकिरहेका छैनन् ।
उनको यो घोषणापछि कति दर्शकले उनलाई यस क्षेत्रमा सपोर्ट नभएर नितेशले यो निर्णय लिएको हो कि भन्ने प्रश्न तेर्स्याएका छन् । जसको जवाफमा उनी भन्छन्, “कसैले सोचेको होला मैले सपोर्ट पाइन अनि गीतमा भ्युज भएन भन्ने लागेको होला । कृपया त्यस्तो नसोचिदिनु होला । किनभने सपोर्ट नपाएको भए म आज यो निर्णय लिने समय सम्म आउने थिइन होला । त्यही सपोर्टकै कारण म आज यहाँ छु ।”
देश विदेशमा भएका नेपालीहरुबाट धेरै साथ सहयोग पाइरहेकोमा नितेशले आभार व्यक्त गरे । त्यसैले उनी कसैलाई पनि नकारात्मक कुरा नसोच्न आग्रह गर्छन् ।
नितेश अगाडि थप्छन्, “एउटा ठाँउसम्म पुगियो । तर अझ धेरै केही गर्नुछ । हाम्रो देशमात्रै किन पछाडि हुने । हरेकले आ–आफ्नो तवरले देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विश्व सामू हाम्रो देशलाई चिनाउनु पर्छ ।”
नितेश अहिले एकदमै नराम्रो समय चलिरहेको बताउँछन् । बिरामी बुबालाई एक्कासी कोरोना संक्रमण भएपछिको अस्पतालको त्यो सकस उनले केही पोख्न खोजेका छन् । तर उनी खुल्न चाहेनन् । अहिले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण अस्पतालमा बेडको अभाव भैरहेको र नितेशका बुबाले पनि त्यही समस्या भोग्नु परेको नितेशले दुखेसो पोखे ।
“जिन्दगीमा दुःख सबैलाई छ । तर म हार मान्ने मान्छे होइन । म केही न केही गर्छु भनेर योजना बनाइरहेको छु । अब कामले नै बोल्ने छु । म व्यक्तिगत प्रयासले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा राखेर छोडछु,” उनले भने ।
तस्बिर ः फेसबुकबाट
सोमबार, वैशाख २०, २०७८ मा प्रकाशित
अभाव र तनावबीच आशावादी रंगकर्मी
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष बन्द हुने पहिलो क्षेत्रमा नाटकघर थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको... ८ मिनेट पहिले
अन्तिम गीत अधुरै छोडेर गए वरिष्ठ गायक प्रधान
काठमाडाैं । वैशाख १२ गते फोन गर्दा वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानले आफू ५-६ दिनदेखि रुघाखोकीबाट ग्रसित भएकाले सन्चो नभएको बताएका... १० घण्टा पहिले
अभिनेत्री श्रीपदाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन
मुम्बई । हिन्दी र भोजपुरी चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी अभिनेत्री श्रीपदाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ । कोरोना भाइरससँग लडिरहेकी... १३ घण्टा पहिले
राजेश हमाल भन्छन्– सरकारले सक्षमता देखाउने समय यही हो
काठमाडौं । नायक राजेश हमालले सरकारले सक्षमता देखाएर कोरोना संक्रमणको विद्यमान चुनौतिबाट जनतालाई पार लगाउनु पर्ने बताएका छन् । फेसबुक... १३ घण्टा पहिले
‘दोस्ती’को गीत सुनाएर ‘माइतीघर’मा गाउन पाएँ
काठमाडौं । वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको ८५ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । छातीमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंस्थित... १५ घण्टा पहिले
गायक प्रेमध्वज प्रधान अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधान अस्पताल भर्ना भएका छन् । अस्वस्थ भएपछि उनलाई काठमाडौंस्थित न्यूरो अस्पताल भर्ना गरिएको... १७ घण्टा पहिले
सङ्क्रमण बढाउने बन्देज हटाऊ
७ घण्टा पहिले
कोभिड संक्रमणले क्यान्सर उपचार सेवा प्रभावित भयो कि छैन ? मंगलबार, वैशाख २१, २०७८
‘माई सेकेन्ड टिचर’ ले महसुस गर्ने गरी ५ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८
कोरोना कहर : जनता, सरकारी संयन्त्र तथा राजनीतिक दल सुध्रनु पर्छ शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८
राजनीतिक इमानदारी गोविन्द अधिकारी
संक्रमण दर उच्च सरकार अलमल्ल
‘अत्यावश्यकसहित ६० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छ’
मंगलबार, वैशाख २१, २०७८
बीमा कम्पनीमा हकप्रदको औचित्य देखिए समितिले रोक्दैन सोमबार, वैशाख २०, २०७८
कांग्रेसले धर्म निभाएको छैन बिहीबार, वैशाख १६, २०७८
बिदा प्रयाग दाइ ! गोविन्द अधिकारी
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सत्याग्रह अभियानको पत्र
बुधबार, वैशाख २२, २०७८
कोरोनाले यो साता भारतमा थप १० नेपालीको मृत्यु सोमबार, वैशाख २०, २०७८
१० अर्बको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना मंगलबार, वैशाख ७, २०७८
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र बुधबार, चैत २५, २०७७
किन संक्रमित हुँदै छन् दुई डोज खोप लिनेहरु ?
सरकारले लुकाउँदैछ कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, १० दिनमा ४५५ शव व्यवस्थापन !
बादलविरुद्ध कसलाई उठाउँदैछन् कांग्रेस–माओवादी ? यस्तो छ अंकगणित
कारमा मृत भेटिएका बालकको ढोका ‘लक’ हुँदा निस्सासिएर मृत्यु !
विश्व मृत्यु : ३,२०७,००८
संक्रमित : १५२,८३४,२७०
नेपालमा निको भएका : २९३४९०
जम्मा मृत्यु : ३५२९
निको भएका: १३०,१२२,६०२
कूल संक्रमित: ३६८५८०